Xildhibaankii 2aad oo ka baxay Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh – Kalfadhi
MUQDISHO, 22 JAN 2019 (KALFADHI)-Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris (Ganey) ayaa noqday Xildhibaankii 2-aad oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka baxa Xisbiga uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo lagu magacaabo Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD ).
Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Xildhibaan Maxamed Xasan ayuu ku sheegay inuu ka baxay Xisbiga UPD, ma sheegin sababta ka bixitaankiisa balse waxa uu sheegay inuu uga baxay arimo isaga u gaar ah. Xildhibaan Ganey ayaa sheegay in waqtigii koobnaa uu la shaqeynayay Xisbigaas uu ka soo bartay shaqsiyaad wanaagsan Islamarkaana uu uga mahadcelinayo wadashaqeyntii dhaxmartay.
“Sida uu qabo qodobka 22-aad ee Dastuurka ku-meel gaarka ah waxaan Maanta oo ay taariikhdu tahay 21-ka Janaayo 2019, halkaan ka cadeeynayaa inaan Kabaxay Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee UPD”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xasan Ganey . ” Xisbigaan waxaan galey anigoo Xor ah oo aan qasbanayn Hadana waxaan ka baxay anigoo Xor ah oo aanan jirin culeeys igu qasbey inaan ka baxo”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo loo yaqaano Ganey.
Xildhibaan Maxamed Xasan oo katirsan Xildhibaanada Dhalinyarada ah ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa Xubnaha mucaaradka ku ah Xukuumadda Soomaaliya, marar badan ayuu ka soo muuqday doodaha Xukuumadda looga soo horjeedo waxa uuna saaxiib dhaw la ahaa Xildhibaano kale oo ku xiran Xisbiga Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmauud.
“Waxaan u mahadcelinaayaa dhamaan Saaxiibada Xisbiga UPD intii yarayd ee aan soo wadashaqeeyney, Xurmad iyo sharaf ayaan u haayaa dhamaan xubnaha Xisbiga, kuwa aan is baraney iyo kuwa aanan weli wakhtiga isku helinba”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaanka Maxamed Xasan oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook. “Ka bixitankeeyga Xisbiga waa go, aan aniga ii gaar ah, Xisbiga UPD markale waxaan u rajeeynayaa Guul iyo horumar”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Maxamed Xasan.
Waa Xildhibaankii 2aad oo bil gudaheed ka baxa Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee uu hogaamiyaha ka yahay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnahaan ma cadeynin sababta ay uga baxayaan Xisbigaan waxaana jira warar is qilaafsan oo sheegaya sababaha looga baxay Xisbigaan. Dadka qaar ayaa ku micneeyay Xisbigaan oo ay ku badnaayeen Xubnaha mucaaradka ku ah Xukuumadda in loo balan qaaday Xilldhibaanada ku jira Xilal iyo iney keensadaan xubno kale oo xilal loogu magacaabo madaama la filyo in isku shaadheyn lagu sameeyo Golaha Wasiirada Soomaaliya.
Warar kale ayaa sheegay iney suurta-gal tahay iney ku biiraan Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay ku jiraan Xildhibaano kale iyo siyaasiin caan ka ah Soomaaliya, waxaa socoto is diiwaan gelinta Xisbiga Sheekh Shariif waxaana la sheegayaa iney iska diiwaan gelinayaan Xildhibaano badan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Hore ayaa Xisbigaan waxaa uga baxay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo katirsanaa Xubnihii ugu cad cadaa Xisbiga kaas oo sidaan oo kale sheegay inuu oga baxay arimo ugaar ah.